Movilforum ကိုဖွင့်ပါ။ ဘာပါလဲ၊ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Movilforum ကိုဖွင့်ပါ။ ဘာပါလဲ၊
အကယ်စင်စစ်၏နာမ ဖွင့်လှစ် Movilforum, ယနေ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဤပဏာမခြေလှမ်းသည်မရှိတော့ပါ။ Open Movilforum သည်Telefónicaနှင့် Movistar တို့၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးနည်းပညာကုမ္ပဏီငယ်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တီထွင်သူများနှင့်စတင်တည်ထောင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပွင့်လင်းသောအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာဖြန့်ချိခဲ့တာလဲ ဘာအတွက်လဲ နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်
1 ပွင့်လင်း Movilforum ဘာလဲ
2 Open Movilforum ကိုဘယ်အချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့တာလဲ
3 Open Movilforum ဆိုတာဘာလဲ။
4 Movilforum ကိုဖွင့်ပါ၊ အဲဒီအချိန်မှာရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်
5 Movilforum နှင့် Web 2.0 ကိုဖွင့်ပါ
6 Open Movilforum APIs: API 1.0 နှင့် API 2.0
6.1 API ၁၁၅၅
6.2 API ၁၁၅၅
ပွင့်လင်း Movilforum ဘာလဲ
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်Telefónicaနှင့် Movistar မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Open Movilforum ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ပွင့်လင်းအသိုင်းအဝိုင်း တီထွင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကုမ္ပဏီငယ်များ၊ ပွင့်လင်းသော software developer များနှင့် Start-ups များကိုကူညီရန် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး mashups နှင့် mobility ဖြေရှင်းချက်များ.
တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်အော်ပရေတာ၊ နည်းပညာအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးခဲ့သည်။ Open Movilforum ဖြင့်ရည်ရွယ်သည် မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများဖန်တီးရန်သတင်းအချက်အလက်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းကပေါ့ စပိန်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးပဏာမခြေလှမ်း မိုဘိုင်းအော်ပရေတာကနေပွင့်လင်း software ကိုအာရုံစိုက်
ဤရွေ့ကားရွေ့ပြောင်း application အသစ်များ၏ဖန်တီးမှုသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိုပေါင်းစည်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Open Movilforum ပေါ်တယ်တွင်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သော APIs, SDKs၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝီကီနှင့်သင်ခန်းစာများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒီပေါ်တယ် ၎င်းသည်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ဖိုရမ်တစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Telefónicaအထောက်အပံ့အသင်းနှင့်ရပ်ရွာလူထုမှ
Open Movilforum ကိုဘယ်အချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့တာလဲ
Movilforum ကိုဖွင့်ခဲ့သည် 2007 ထုတ်လုပ်သူ၏ပူးပေါင်းမှုနှင့်အတူ Movistar ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Nokia နှင့်သင်၏စီမံကိန်း ဖိုရမ် Nokiaထို့ကြောင့်တည်ဆောက်သူအားကမ်းလှမ်းမှုများကိုရှိပြီးသား interfaces နှင့် tools များစွာဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။
Movistar သည် Open Movilforum ကို Campus Party တွင်တင်ပြခဲ့သည် (Valencia, ဇူလိုင်လ 23-29, 2007) ။ ထိုနေ့များ၌ Movistar က Open Mobileforum အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲပြိုင်ပွဲကိုခေါ်ယူခဲ့သည်၊ ၎င်းအတွက် Linux နှင့် Wifi ပါသော Nokia N2.0 terminal နှင့်အတူ Mobile 800 အတွက်အကောင်းဆုံး application ကိုရရှိခဲ့သည်။
Open Movilforum အသိုင်းအဝိုင်းသည်Telefónica၏မိုဘိုင်းအော်ပရေတာဖြစ်သော O2 မှယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် O2 Litmus ပြုစုသူအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပွင့်လင်းသောရုပ်သံလိုင်းရှိသည်။ တယ်လီကွန်းကိုစတင်ခဲ့သည် Movistar Developers ပလက်ဖောင်း ၎င်းမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည် မျှဝေပူးပေါင်းပူးပေါင်းနှင့်စပိန်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းစသည့်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင်Telefónicaကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောယခင်အတွေ့အကြုံများကထိုအစာကိုကျွေးမွေးခဲ့သည်
Open Movilforum ဆိုတာဘာလဲ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မိုဘိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုမျက်နှာပြင်အသစ်များသည်စီးပွားဖြစ်မစတင်ခင်ပင် third-party developer များနှင့်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်ထားသောအသိုင်းအဝိုင်းသည်Telefónicaမှကမ်းလှမ်းသောဤကိရိယာများနှင့်အားသာချက်များကိုရယူနိုင်သည်။
ပွင့်လင်း Movilforum ပဏာမခြေလှမ်းအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည် ပွင့်လင်းသော software applications များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့ ရိုးရှင်းသော APIs များ၊ ကိရိယာများနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများလည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွင်းရှိပရိုဂရမ်များနှင့်ကွန်ယက်ရှိတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုများစွာရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Movilforum ကိုဖွင့်ပါ၊ အဲဒီအချိန်မှာရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်
Movilforum ပွင့်နေတယ် ပထမ ဦး ဆုံးအခမဲ့ software ကိုပဏာမခြေလှမ်း စပိန်အော်ပရေတာများကရာထူးတိုး။ အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ခဲ့သည်အားလုံးရောက်ရှိဖို့ဖြစ်ခဲ့သည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ။ ဆိုလိုသည်မှာပါဝါဖြစ်သည် mobility ဖြေရှင်းချက်ပေး အဲဒီအချိန်တုန်းကအရမ်းဈေးကြီးတယ်၊ ရှုပ်ထွေးပြီးမသိတဲ့အရာလို့မြင်ခဲ့တယ်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီငယ်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွင့်လင်းသောဆော့ဖ်ဝဲတီထွင်သူများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဝဲလ်များကိုပွင့်လင်းသောဆော့ဖ်ဝဲလ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာတစ် ဦး မှတစ်ခါမျှလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ယင်းသည်အလွန်ရှေ့ဆောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Movilforum နှင့် Web 2.0 ကိုဖွင့်ပါ
ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုTelefónica၏ Web 2.0 မဟာဗျူဟာအရဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက် (open.movilforum.com) မှ ရိုးရှင်းသော APIs များ၊ ကိရိယာများနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကိရိယာများအတွင်းရှိပရိုဂရမ်များနှင့်Telefónica၏ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေသည့်ကိရိယာများကိုပေးခဲ့သည်။
ဖွင့်လှစ်သော Movilforum သည်ရပ်ရွာလူထုအားလုံး၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများပါ ၀ င်နိုင်သည့်ပွင့်လင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ Telefónicaနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်လာသည်နှင့်အမျှ APIs များသည်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာက ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလိုလုပ်ခဲ့တယ် သိုလှောင်ရုံ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ Mashup.
Open Movilforum APIs: API 1.0 နှင့် API 2.0
Movilforum ကိုဖွင့်ပါ API ၁၁၅၅Movistar မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် APK များကိုအစီအစဉ်တကျအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်စီးရီးများမှအကျိုးကျေးဇူးကိုရယူခြင်း။ ဤပထမ APIs များသည်များစွာသောအရေအတွက်ကိုခွင့်ပြုသည် အင်္ဂါရပ်တွေ ကွဲပြားခြားနားသည်:
စာဖြင့်စာလက်ခံရရှိခြင်း (pop3)Movistar ဖုန်းနံပါတ်သို့ပို့သောတိုတောင်းသောမက်ဆေ့ခ်ျများ (SMS) ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူခွင့်။
SMS ပို့ခြင်းhttp ကို ဖြတ်၍ SMS ပို့ခွင့်ပြုသည်။
MMS ပို့ခြင်းhttp http မှတဆင့် MMS ပို့ခွင့်ပြုသည်။
SMS 2.0- SMS မှတဆင့် IM လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ (သူငယ်ချင်းများစာရင်း၊ တည်ရှိမှုအနေအထား၊ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအော့ဖ်လိုင်းပို့ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်သောအခါသူတို့ကိုလက်ခံခြင်း)
ကော်ပီအေဂျင်ဒါ- သင်၏အဆက်အသွယ်အမည်ကို SIM မှ http interface မှတဆင့်ရယူခွင့်ပြုသည်။
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု reception ည့်ခံ (SIP ကို ​​အခြေခံ၍၊: ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုလက်ခံပြီးသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် အစီအစဉ်များ အသံနှင့်ဗီဒီယို။
အော်တို Wap Push: Wap Push မက်ဆေ့ခ်ျကို http terminal မှတစ်ဆင့်မိုဘိုင်း terminal သို့ပို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်း၊ ၂၀၀၉ အကုန်ပိုင်းနှင့် ၂၀၁၀ အတွင်းတွင် Open movilforum သည်စပိန်နိုင်ငံရှိ APIs အသစ်များစတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် APIs များသည် WEB 2009 ဖြစ်စဉ်ကိုပိုမို ဦး တည်ခဲ့သည်။ သူတို့တွင်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်မှာ -
SMS / MMS ပို့ခြင်း
SMS / MMS ၏ URL ဖြင့်လက်ခံရရှိမှု။
စာတိုပေးပို့ရေး (SMS / MMS) 'ဆွဲ' သည်။
geolocated စာတိုပေးပို့မှု (SMS / MMS) ။
ဤရိုးရှင်းသော APIs များဖြင့်ကိရိယာများအတွင်းရှိပရိုဂရမ်များနှင့်Telefónica၏ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ယာယီနေရာချထားခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုရိုးရှင်းစေသည့်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်ပေးနိုင်သည်မှာသေချာသည်။
Open Movilforum သည်ထိုအချိန်တွင်အလွန်အဆင့်မြင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစပိန်တွင်ပထမဆုံးရှေ့ဆောင်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်သည်မှာအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသို့ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာTelefónicaကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုခင်ဗျားသိလား။ ထင်မြင်ချက်များတွင်သင့်မေးခွန်းများကိုချန်ထားပါ။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာဖတ်ရှုပါမည်။